ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: September 2008
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ.ဥပုတ်လကတော.ဒီနေ. စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ.မှာပြီးဆုံး
Ramadan violators penalised
<font size="2" color="#000000" face="Verdana"><A href="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/click/zone?zid=22&pid=0&lookup=true&position=1" target="_top"> <IMG src="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/view/banner/image/zone?zid=22&pid=0&position=1" height="250" width="250" hspace="0" vspace="0" border="0" alt="Click Here!"> </A> </font>
Posted by Unknown | at 12:06 PM |0comments
ဒါလဲကိုဂျူရဲ.ကွန်မန်.လေးပါ။agree to disagree ပေါ.ခင်ဗျာ။သူ.အကြိုက်ကိုယ်.အကြိုက်ဆို
မှန်ပါတယ်၊ ကိုပိတောက်ပြောသွားတာတွေကတော့ ချောလို့ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိနေတယ် -
အသိအမှတ်မပြုခြင်းဖြင့် ရလာမဲ့အကျိုးးဆက်တွေက - ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ နအဖအတွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖေါ်ဆောင်ဘို့ တာဝန်ပိုကြီးမယ်၊ တိုင်းပြည်အဘက်ဘက်ကကောင်းအောင်ကျိုးစားဖို့ တွန်းအားဖြစ်လာမယ်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ မဟုတ်မတရားအလုပ်မခံဘူး၊ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကိုပြနိုင်မယ်။ နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် စံပြနမူနာကောင်းဖြစ်မယ်။ ကိုပိတောက်တို့ပြောသလို ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဒီမိုကရေစီပါတီတွေ လှုပ်ရှားလို့ ရမယ်မရဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှတာဝန်မယူနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် အသိအမှတ်ပြုဘို့ မလောဘဲ စောင့်ကြည့်တာမှန်တယ်။ ဒီ option ကို NLD ကိုင်ထား ရမယ်။ အခုငြင်းနေမဲ့အစား နအဖက တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေလေးစားလိုက်နာလာပြီဆိုရင် အချိန်မရွေးအသိအမှတ်ပြု ပူးပေါင်းလို့ရပါတယ်။ နအဖကိုညစ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ နအဖကို စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ အရည်အခြင်းပြဘို့အခွင့်အရေး ပေးထားတာ။
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျိုးမဲ့က - NLDကို ဖျက်သိမ်းခံရနိုင်တယ် ဆိုတာတစ်ခုဘဲရှိတယ်။ ဘာမှမလျော့ပါးပါဘူး။ ခုလည်း ဘာလှုပ်ရှားနေရလို့လဲ။ နောက်ပြီး၁၉၈၉ကထဲက ဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရုံနဲ့တော့ အလိုလိုပျက်မသွားဘူး ထင်တယ်။ တခြားနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်တာ ခဏခဏ ကြားဘူးပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ အခါဝင်မယ် မ၀င်နိုင်ရင်မ၀င်ဘဲနေမယ်၊ သူ့သဘော၊ မ၀င်လို့ ပါတီပျက်မသွားဘူးထင်တယ်။ အစိုးရက တမင်ဖျက်မှပျက်မယ်။
ကိုပိတောက်ပြောသလို တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီပါတီတွေ လှုပ်ရှားနေပြီ၊ ဒိမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ ရသင့်သလောက်ရနေပြီဆိုလဲ ဒေါ်စုနဲ့ NLDကို ကျွန်တော်တို့ မလိုတော့ဘူး၊ မေံလိုက်တော့၊ သူတို့ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားခဲ့ကြစို့ပေါ့။
Posted by Unknown | at 11:55 AM |0comments
Labels: ကူးယူတင်ပြခြင်း ၊ source : ပိတောက်မြေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို တိုင်းပြည်ကချစ်တဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်မပေါ်ခဲ့တာ အနှစ် ၅၀ ကျော်လာပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်၊ ရိုးသားမှုရှိတယ်။ ပြည်သူကိုမလိမ်ဘူး၊ တာဝန်ယူမှုရှိတေယ်၊ တပ်မတော်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး မိမိအတွက် ကိုယ်ကျိုးမရှာခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေက သူ့ကို ယုံကြည်တယ်၊ ချစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေစတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ သုံးဦးလုံးတစ်ယောက်မှ ဒီလိုအရည်အချင်းတွေမရှိလို့ ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာကိုမရကြ၊ ဘ၀မှာမအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ နှမြောဘို့ကောင်းလှပါတယ်၊ တတိယမျိုးဆက် ရောက်နေပါပြီ၊ ကိုယ့်ရာထူး အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို နစ်သည်ထက်နစ်အောင်လုပ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြည်သူတွေလေးစားအောင် မနေကြဘဲ ပြည်သူတွေလေးစားတဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေကို မြန်မာ့သမိုင်းက ဖျောက်ဖျက်နိုင်ဘို့ကျိုးစားလာကြတဲာ့အထိပါဘဲ။ ခေတ်သစ်မြန်မာ့ တပ်မတော်သမိုင်းကို ပြန်ကြည့် ကြရအောင်။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီနဲ့ မဆလခေတ်
၁၉၆၂ခုနှစ်မတ်လမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုထံက မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက စစ်တပ်နဲ့ အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါ။ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပါ၊ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့လက်အောက်က လွတ်လပ်ရေးကျိုးပမ်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားသခင်တစ်ဦးပါ။ ဒါပေမဲ့သူ အာဏာရတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သစ္စာမဖောက်တန်း လက်မောင်းသွေးသောက် သစ္စာဆိုခဲ့တဲ့ ရဲဘော် သုံးကျိပ် အပါအ၀င် တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ ဒေါက်တာဘမော်၊ ဦးနု၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ အပါအ၀င် လွတ်လပ်ရေး ကျိုးပမ်းခဲ့သူ နိုင်ငံရေးသမား လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေ သမ္မတကြီး စပ်ရွှေသိုက်၊ မန်းဝင်းမောင်၊ ဆမားဒူဝါးဆင်ဝါးနောင် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တရားသူကြီးချုပ်ဦးမြင့်သိန်း၊ ရှေ့နေချုပ်ဦးချန်ထွန်းစတဲ့ ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေအားလုံးကို အကြောင်းမဲ့ နှစ်ရှည်ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားလိုက်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုစစ်တပ်နဲ့ ခတ်ကြမ်းကြမ်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို စစ်အင်အားအသုံးပြုပြီး ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်း အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် စစ်ဦးစီးချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြည်သူကို ပထမဦးဆုံး မိန့်ခွန်းပြောရာမှာတောင် “ဒါးဒါးချင်း ဒုတ်ဒုတ်ချင်း” ဆိုပြီး စိန်ခေါ် လူမိုက်စကားပြောခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
သူ့လို သူတပါးအိမ်ယာပြစ်မှားသူ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းအပေါ်မှာ သစ္စာမရှိသူ၊ လူနဲစုတိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်အနိုင်ကျင့်တတ်သူ၊ သားသမီးအရွယ်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကိုညှာတာစိတ်မရှိသူ၊ ဥပဒေကိုလေးစားရမှန်းမသိသူ၊ ပြည်သူကို လက်နက်နဲ့စိန်ခေါ်တတ်သူ စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုကို ၂၆နှစ်လုံး အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများကို ချေမှုန်း နှိပ်ကွပ် အပြီး ၁၉၇၄ခုနှစ်မှာ သူစိတ်ကြိုက်ဆွဲတဲ့ အခြေခံဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်ပါတီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ(မဆလ) ဖြစ်လာပြီး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အတိုချုပ်ရရင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာရယူထားစဉ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကြီးစိုးရေး စစ်ဝါဒ စနစ်ဆိုးကြီး ခေါင်းထောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဝါဒကိုလက်မခံလိုတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ၊ ပြည်သူတွေမကျေမနပ်ဖြစ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကိုလဲ ဂရုပြုလက်ခံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ စစ်အင်အားသုံးပြီး နှိမ်နင်းခဲ့သလို နိုင်ငံရေးအမြင်မတူသူများ၊ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သူများ၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များကိုလဲ ကြီးလေးသောပြစ်ဒါဏ်များပေးပြီး ကြမ်းတမ်းစွာ နှိပ်ကွပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ကြီးများရဲ့ စီးပွားရေးမကျွမ်းကျင်မှု အကျင့်ပျက်ချစားမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အချိန်တိုအတွင်း ဆင်းရဲမွဲတေ သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး၁၉၈၆ခုနှစ်မှာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး ဘုန်းဘုန်းလဲပြိုကျ ပျက်စီးသွားပြီး တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးတွေမဆပ်နိုင်တော့လို့ အရှေ့တောင်အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ ဘ၀ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။
၁၉၈၈မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ(မဆလ)နဲ့တစ်ပါတီစနစ်ကို ပြည်သူလူထုက မကြေမနပ် လမ်းမပေါ်ထွက်အုံကြွ ဆန္ဒပြပြီးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ အရေးအခင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး အရေးအခင်းပါဘဲ။ ထိုစဉ်က စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံယူထားတဲ့ မဆလပါတီအစိုးရဟာ စစ်အင်အားအကူအညီ မပါဘဲလူထုကိုအုံကြွမှုကို နှိမ်နင်းဘို့ကျိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်တပ်လက်ထဲ အပ်ခဲ့ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ပြည်သူကိုနောက်ဆုံးနှုပ်ဆက် စကားပြောရာမှာတောင် “စစ်တပ်ဆိုတာ ပြစ်ရင်မှန်အောင်ပြစ်မယ်၊ မိုးပေါ်ထောင် မဖောက်ဘူးကွ” လို့ မာန်ဖြီပြပြီး အာဏာစွန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောင်သူသေတဲ့အထိ ပြည်သူတွေရဲ့ မေတ္တာကိုမရခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး ပြည်သူကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ ဖြုတ်ချခံရတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဇတ်သိမ်းပါတယ်။ နယ်နယ်ရရ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ယခင်ကသူမဖခင်ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်ဟောင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ ၀င်ရောက်စွပ်ဖက် ပတ်သက်လေ့မရှိဘဲ ခတ်ခွာခွာ နေခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရေးအခင်းအတွင်း နာမည်ကြီးလာပြီး ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရလာတော့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းသမီး ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းက ဒေါ်စုနဲ့ မုတ်ဆိတ်ကုလားပုံ ကိုယ်လုံးတီးပုံဆွဲပြီးအောက်က “ကုလားအုပ်မ-နင့်လင်ကုလားကိုခေါ်ပြီး မြန်မာပြည်က အခုချက်ခြင်း ပြန်ထွက် သွား” ဆိုတဲ့စာရေးထားတဲ့ စာရွက်တွေ ရန်ကုန်မြို့လုံးအနှံ့ ညဘက်မှာ လိုက်ကပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ဟာ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးကို တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးတဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မို့ အကုန်သူသိပါတယ်။ ဒါတွေပြောနေတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းတို့ သားအဖ စခဲ့တဲ့၊ ရှုပ်ခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်းဆိုတာသိစေချင်လို့ပါ။ မြန်မာ့ပြည်မှာ “၁၉၈၈တွင် ပြည်သူအပေါင်းက ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကို ဖြုတ်ချ၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက် လိုက်ကြလေသတည်း” လို့သမိုင်းတွင်သွားမှာမျိုးကို သူတို့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြိုင်ဘက်လိုသဘောထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ သူ့ကိုဖယ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးကို ပြည်သူက တင်တယ် ဆိုတာကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ မခံနိုင်ပါဘူး။ ခုထိ တပ်မတော်ကို လမ်းမှား ပို့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုက္ခပေးနေတာ အဲဒီစိတ်ဓါတ် ရိုက်သွင်းခံထားရလို့ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင်ရဲ့ (န၀တ) ခေတ်
၁၉၈၈မှာ်တက်လာတဲ့ န၀တဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်စောမောင်အစိုးရဟာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ရော့-မင်းတို့အာဏာယူကြ၊ ဆန္ဒပြတဲ့ ကောင်တွေကို ဆော်စမ်းကွာဆိုလို့သာ သေနပ်ကိုင်ပြီးတက်လာတာ တိုင်းပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဘို့ ဘာမှစိတ်ကူး မရှိပါဘူး၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း လောင်းရိပ်မိနေသူမို့ စိတ်ကောလူကော အဆင်သင့်မဖြစ်ပါဘူး။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးလဲ ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်တတ် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလဲ ပီပီပြင်ပြင်မလုပ်ရဲမို့ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုသူတွေကို နှိပ်ကွပ်တာကလွဲလို့ ပြည်သူနဲ့တပ်မတော် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးပြီး အရင်မဆလလက်ထဲ အာဏာပြန်လွှဲဘို့လောက်ဘဲ စိတ်ကူးဥဏ်ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်လည်း မဆလဘဲ နိုင်မယ်လို့ ဆရာကြီးတွေကို အထင်ကြီး နေခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြား(၁) ရပ်ကွက် မဲဆန္ဒနယ်မြေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရွေးခံဘို့ စာရင်းတင်သွင်းတာမှာ ဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့ မဆလ ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးလဘန်းဂရောင်းက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုထားသူဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးကို ရရှိခံစားနေသူဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကော်မရှင်ခုံရုံးက ဒေါ်စုအပေါ် ဦးလဘန်းဂရောင်း၏ စွပ်စွဲမှုများ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုမရှိသဖြင့် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အနိုင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ပျော်လွန်းလို့ လူတွေ လမ်းမပေါ်ထွက် “က” ကြတာမှတ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ကိုယ်တိုင် TV မှာပေါ်လာပြီး ရန်ကုန်တိုင်းခုံရုံး လူကြီးတွေကိုကြိမ်းမောင်းပြီး ဗဟိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကနေ တစညကိုယ်စားလှယ်ကို အယူခံတင်ခိုင်းအနိုင်ပေးပြီး ဒေါ်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျောက်လွှာကို ပယ်လိုက်ပါ တော့တယ်။ ဒါပြန်ပြောရတာလဲ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ န၀တ အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်စုမပါရအောင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုအတင်းအဓ္ဓမ ၀င်စွပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသိစေချင်လို့ပါ။ သိမှီသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အထောက်အထားတွေ မိန့်ခွန်းတွေ၊ သတင်းစာတွေမှာ ပါပါတယ်။ ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အစကထဲကလဲ အာဏာလိုချင်သူမဟုတ်၊ တိုင်းပြည်အကြီးအကဲ၊ သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်လုပ်ချင်သူ မဟုတ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲလဲ မ၀င်ပါဘူးပြောနေတာကို န၀တဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်စပ်ဆော့ပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု လုပ်မယ်ဆို နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရမယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုဝင်ရမယ်ဆိုလို့ ဒေါ်စု၊ NLD ပါတီနဲ့ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။
ပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးလွှတ်တော်မခေါ်တာ၊ အာဏာမလွှဲတာဟာ ပြည်သူကိုသစ္စာဖောက် တာပါ။ တပ်မတော်သမိုင်းမှာ တကဲ့ အမဲစက်ကြီးပါ။
ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ရဲ့န၀တအစိုးရဟာ တက်လာတုန်းကပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိ အားလုံး ချိုးဖောက်တဲ့ အစိုးရဆိုပြီး နာမည်ကြီးသွားတယ်၊ ၁၉၉၃မှာသူ့တပည့်တွေကဘဲ ရူးတယ်လို့စွပ်စွဲပြီး အတင်းအကြပ် ရာထူးက ဖယ်ရှား တာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး ပြည်သူကိုလိမ်တဲ့ သိုးမဲအစစ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး ရူးပြီးသေတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ (နအဖ) ခေတ်
၁၉၉၃မှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေခေါင်းဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ(နအဖ)အစိုးရဆိုပြီး နာမည် ပြောင်းတယ်။ နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုပြီး အခြေခံဥပဒေသစ်ဆွဲမယ် အမျိုးသားညီလာခံ ခေါ်ပါတယ်။ NLDကလဲ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီမို့ လွှတ်တော်ခေါ်ပေးပါ၊ မခေါ်ပေးနိုင်ရင်လဲဆွေးနွေးပါ။ နအဖကအမျိုးသားညီလာခံ တက်စေချင်ရင် တက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာဖြစ်အောင် လျှော့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၉၃ အမျိုးသားညီလာခံ တက်ပါတယ်။ အခြေခံမူ ၁၀၉ချက်တွေဘာတွေဆွဲတဲ့အထိ သည်းခံနေသေးတယ်။ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းမှာ ပါဝင်ထမ်းရွက်မယ်ဆိုပြီး စစ်ဦးစီးချုပ်က လွှတ်တော်မှာအမတ် ၂၅% ယူမဲ့ကိစ္စလုပ်လာတယ်။ NLDကဒီအခွင့်အရေးတွေဟာ နအဖလိုချင်တိုင်း တဘက်သတ်ယူလို့မရပါဘူး။ ပြည်သူတွေသဘောတူပါမှ ပေးလို့ရပါမယ်၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပါဆိုတော့လဲ နအဖက အဖက်လုပ်အကြောင်းတောင် မပြန်ဘူး။ နအဖကမူမှန်ဘူး။ လုပ်ချင်ရာဘဲဆက်လုပ်နေလို့ ပြောမရတဲ့အဆုံးမှာ NLDက အမျိုးသားညီလာခံကို ဒီအတိုင်းဆို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ မညီညွတ်ဘူး၊ မပါတော့ဘူး ဆိုပြီးကန့်ကွက်ပြီး ထွက်သွားတယ်။ လိုက်ဖမ်းပြီးပြန်တက်ဘို့ စည်းရုံးတာဘဲ၊ ၅-၆ယောက်လောက် ဖဲ့ထုတ်နိုင်ပေမဲ့ မြန်မာသမိုင်းမှာ နအဖလုပ်တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံ လည်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီက သဘောမတူလို့ စွန့်ခွာလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတဲ့ ညီလာခံ ဘ၀ရောက်သွား ခဲ့ရတယ်။ သမိုင်းမကောင်းပြန်ဘူး၊ ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး NLDမပါလဲ ဆက်လုပ်မယ်၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဂရုမစိုက်ဘူး ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ ၁၉၉၅မှာ ဘာမှမကြေညာဘဲ ရပ်လိုက်ရတော့တယ်။ NLDနဲ့ အတိုက်အခံတွေ ကိုတော့ ခေါင်းမဖေါ်နိုင်အောင် နှိပ်ကွပ်ပါတော့တယ်။ NLDအဖွဲ့ဝင်တွေကို မတရားဖမ်းထောင်ချ၊ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ နှုပ်ထွက်ခိုင်း၊ နှုပ်ထွက်လွှာတွေ အတင်းအကြပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်း၊ NLDလွှတ်တော်အမတ်တွေကို လူထုကပြန်ဖြုတ်ချပါတယ်ဖြစ်အောင် အစိုးရကိုယ်တိုင် ကန့်ကွက်ပွဲတွေ စီစဉ်သတင်းစာထဲထည့် ၁၉၉၅ကစပြီး တိုင်းပြည်ကိုတောက်လျှောက် အာဠာဝက တိုက်တော့တာဘဲ။ NLDဆို ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်အောင် စိတ်ရှိတိုင်း နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုလုပ်တော့ နအဖလဲ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကျဆင်းသွားတယ်။ တိုင်းပြည်ထဲ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေလာမှာစိုးလို့ အာဆီယံအလှည့်ကျသဘာပတိတောင်မလုပ်ရဲဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ဆို ဝေလာဝေး၊ Sanction တွေ လာလိမ့်မနော် ပြောလဲ ဂရုမစိုက်ဘူး၊ ပိုဆိုးပြမယ်ကြိမ်း။ ဒါပေမဲ့ တကယ်စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုလုပ်ခံရတော့ အကြံတုန်းဥဏ်တုံး ဒီတိုင်းငုတ်တုပ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိ မခုခံမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ ပထမဦးဆုံး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစိုးရရဲ့ အတိုက်အခံအပေါ် မတရားမှုတွေကို မဲခွဲခံရတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဖြစ်လာတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေခေါင်းဆောင်တဲ့ နအဖအစိုးရအဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာသိ လူဆိုးစာရင်းဝင် အစိုးရဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ပြည်တွင်းမှာလဲ ခရီးသွားနေတဲ့အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင်ကို ဒီပဲယင်းမှာဝိုင်းရိုက်တယ်၊ မသေတော့ဖမ်းပြီး အကြယ်ချုပ်ချထား တယ်။ အတိုက်အခံပါတီ ရုံးတွေချိတ်ပိတ်ပြီး ပါတီဝင်တွေကို အမျိုးမျိုး အမှုဆင်ဖမ်းထောင်တွေချတယ်။ ဘိန်းပြစ်တောင်ဖမ်းလိုက် သေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုသူတွေအပေါ် မတရားမှုတွေအများကြီး ကျူးလွန်လာရတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ မလှုပ်နိုင်အောင် တအားတင်းကြပ်ထားရတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ မလုပ်သာမကိုင်သာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစီးပွားရေးတွေ ပိုပိုပြီး ကျဆင်း လာတယ်။ နောင်တစ်ချိန် တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်ရမဲ့ လူငယ်ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ခွာသွားကြတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာ တယ်။ ပြည်သူတွေစာရိတ္တ ပျက်ကုန်တယ်။
ဒီပဲယင်းကိစ္စအပြီး ပေါက်တဲ့နှဖူးမထူးတော့ဘူးဆိုပြီး ပြည်သူကို ဒုတိယအကြိမ်တပါတ်ရိုက်ဘို့ ၂၀၀၅မှာ အမျိုးသားညီလာခံကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးထားသူတွေနဲ့ အခြေခံဥပဒေကိုဆွဲတယ်။ ပိုဆိုးတာကဒီတစ်ခါ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် မပါသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ NLDခေါင်းဆောင်တွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေစတဲ့ ကန့်ကွက်မယ် ထင်သူတွေ အကုန်ဖမ်းထားပြီး ၂၀၀၈မှာ ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူ၉၂%က ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး အတည်ပြု လိုက်တယ်။ ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀မှာ ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ အတိုက်အခံကတိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးမရှိဘူး ဆိုပြီး လက်မခံဘူး၊ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကနိုင်လို့ အာဏာမလွှဲချင်လို့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို နအဖက ထပ်လုပ်တာလေ၊ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးသား NLDပါတီက နောက်တစ်ခါ ထပ်ဝင်ပြိုင်ပေးရအောင် အရူးမှမဟုတ်တာ။ ဘယ်ဝင်ပြိုင် ပါတော့မလဲ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ် ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုဘူး တရားမ၀င်ဘူး လုပ်ကရော။ အခုတော့ အဲဒီအခြေအနေမှာ နအဖ road map တစ်လစ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ကုလသမ္မဂကလဲ အကြီးဆုံးအတိုက်အခံပါတီကြီးက အသိအမှတ်မပြုဘူး၊ တရားမ၀င်ဘူးကြေညာထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတော့ အားလုံးဝင်ပါနိုင်အောင် အတိုက်အခံနဲ့ ပြေလည်ဘို့တော့လုပ်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူညီပါ့မယ် ဆိုတာကို နအဖက ၀မ်းသာအားရ ဒို့ road map ကို ကုလကတောင် ထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီး အသားယူနေတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေဟာ ဘာတွေပြောနေနေ တကယ်တန်းဒီမိုကရေစီစနစ် ကိုယုံကြည်သူ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာ ဖက်တွယ်ထားလိုသူဖြစ်မှန်း နိုင်ငံတကာကသိသွားပါပြီ။ image ပျက်သွားပြီ။ သူခေါင်းဆောင် နေသမျှကာလပါတ်လုံး နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုမရနိုင်တော့ဘူး၊ ဘယ်ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကမှလဲ သူ့ဘက် ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့လက်ထက်မှာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ၊ Sanctionတွေ လျှော့ပါးသွားဘို့ မရှိပါဘူး၊ တိုးလာဘို့ဘဲ မြင်ပါ တယ်။
သူ့လဲအပြစ်မပြောပါဘူး၊ ဒါမျိုးဘဲတွေ့ဘူးတယ်လေ၊ ဒီနည်းဘဲတတ်တာမဆန်းပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေဟာ သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းထက် ဆိုးတဲ့လမ်းကို တဖြေးဖြေးသွားနေပြီလို့ဆိုကြတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက အတိုက်အခံတွေအားလုံးဖမ်း ထောင်ထဲထည့်ထားပြီး သူ့စိတ်ကြိုက် အခြေခံဥပဒေဆွဲတယ်။ သမ္မတကြီးတက်လုပ်တယ်၊ ပါတီဥက္ကဌကြီး တက်လုပ်တယ်။ နှစ်ရှည်လများအလွန်အကျွံအာဏာယူထားမိတော့ ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာခံရပြီး နာမည်ပျက်နဲ့ဇတ်သိမ်းရတယ်။ အရင်သူ့အတွက် အသက်ပေးမယ်ဆိုပြီး မော်မကြည့်ရဲတဲ့ သစ္စာရှိတပည့်တွေကဘဲ သူမသေခင်အကြယ်ချုပ်ချထားပြီး သူ့သားသူ့မြေးလူမမယ်လေးတွေကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့ သေဒဏ်တွေပေးပြီး ထောင်ထဲထည့်ထားတာ ခံရတယ်။ သူသေတော့ အကျဉ်းရုံးပြီးအသုဘကို လူအစိပ်ထက်ပိုလိုက်မပို့ရဘူး၊ အထိမ်းအမှတ် ရုပ်ထုအုတ်ဂူမလုပ်ရ မီးရှို့ပြီး ပြာကို ရန်ကုန်မြစ်ထဲမျှောဘို့ အမိန့်ထုတ်တာ ခံရတယ်။ သမိုင်းမကျန်အောင်လုပ်ခံရတယ်။ မတန်ပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေလဲ ဒီနည်းဘဲတတ်ရင် ဒီလမ်းအတိုင်းသွားမှာဘဲ။ ရှင်းနေတာဘဲ ဗေဒင်မေးစရာမလိုပါဘူး။ ရွေးစရာလမ်း မရှိပါဘူး။ ဒီလိုသံသယာလည်နေတာကြီးကိုရှောင်ချင်ရင် သူလုပ်ပုံကိုင်ပုံ ပြင်မှရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက အနေသာကြီးပါဗျာ။ နောက်တက်လာဦးမဲ့ စတုထ္ထမျိုးဆက်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လမ်းရွေးမလဲ၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း လှည်းကျိုးကြီးကို ထမ်းလာတာ ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်အစိုးရအဆက်ဆက် ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားရင် ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းကြီး မြင်သာပါတယ်။ နအဖအစိုးရမှမဟုတ်ဘူး ဘယ်စစ်အာဏာရှင်အစိုးရမဆိုလက်နက်ရှိလို့ ကိုယ့်ကိုမထောက်ခံသူတွေအပေါ် မတရားအနိုင်ကျင့် ချင်ရင် ကျင့်ချင်သလိုကျင့်လို့ရတယ်။ ညစ်ချင်သလို ညစ်နိုင်တယ်။ ဒါ အစွမ်းအစ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဂုဏ်မယူပါနဲ့။
ပြင်တတ်ရင်သားစဉ်းမြေးဆက် နာမည်ကောင်းရမယ်၊ ရာထူးဥစ္စာစည်းဇိမ်တွေလဲတပြားမှမလျှော့ပါးသွာစေရဘဲပြင်တဲ့နည်းရှိတယ်၊ အလွယ်လေးပါဗျာ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုတော့ နာမည်ပျက် အမဲစက်ကြီးနဲ့ ဒီအတိုင်း မထားခဲ့ကြပါနဲ့။
Posted by Unknown | at 11:50 AM |0comments
They will stand by you, no matter what ever be the matter....!!!
Posted by Unknown | at 9:45 AM | 1 comments
Labels: ဟာသ source: six faces
An old Man is teaching his grandson about life. "A fight is going on inside me," he said to the boy. "It isaterrible fight between two wolves.
Posted by Unknown | at 9:36 AM |0comments
Labels: ။ source: six faces, တစ်ဆင်.တင်ပြခြင်း
A man walks intoarestaurant withafull-grown ostrich behind him. As he sits, the waitress comes over and asks for their orders.The man says, "I'll haveahamburger, fries andacoke," and turns to the ostrich, "What's yours?"
"The usual?" asks the waitress."No, this is Friday night, so I will haveasteak,baked potato and salad," says the man, "same for me," says the ostrich.
My first wish was that if I ever had to pay for anything,I would just put my hand in my pocket and the right amount of money would always be there."
The man sighs, pauses, and answers.....................
Posted by Unknown | at 9:25 AM |0comments
If you tell the boss you were late for work because you hadaflat tire, the next morning
If you change queues, the one you have left will start to move faster than the one you
တစ်ခါတစ်လေကိုယ်သွားမိတဲ.အတန်းကကိုယ်လဲရောက်ရော counter closed ဆိုတာတောင်ကြုံရ
Posted by Unknown | at 8:52 AM |0comments
Labels: from six faces, ကူးယူတင်ပြခြင်း
source : six faces
Posted by Unknown | at 5:50 AM |0comments
forward mail တွေအမြောက်အများရောက်လာလို.မလိုအပ်ပဲdelete လုပ်ရတဲ.mailတွေအတွက်
အချိန်မကုန်စေနိုင်အောင်reference mail လေးတစ်ခုထားယင်ပိုကောင်းတာပေါ.။အခုအဲဒီအခက်
အခဲကိုဖြေရှင်းဖို.အတွက် mailinator ကိုသွားပြီးe-mail address တစ်ခုလုပ်လိုက်၇ုံပါပဲ။
From: Loritha @ MindTree Ltd. (Chennai)
>>> www.mailinator.com <<<
Mailinator isafree disposable e-mail address. The idea is to letauser createanew e-mail address on-the-fly, whenever needed, for instance while fillingaform onaweb site.
ဒီဆောင်းပါးကို six faces ကရယူပါတယ်။
မှတ်တမ်းဖြစ်နေတယ်" ဟုဒုတိယရဲချူပ် Mr.Khamis Mattar Al Mazeina ကရေဒီယိုအစီအစဉ်တစ်
သူကပြောပါတယ်။ဆက်ပြီးယ္ခုဥပုတ်လ( Ramadan )ပထမဆယ်ရက်အတွင်းမှာကိုလိမ်လည်တောင်း
စားသူပေါင်း ၆၅ ဦးဖမ်းဆီးထားမိပြီးလို.သူကပြောပြသွားပါတယ်။
Beggar caught trying to con top
Dubai: Whenaman approached Major General Khamis Mattar Al Mazeina, Dubai Police Deputy Commandant General, inaparking lot and showed him an ultrasound scan saying that he was very ill and needed money, the top officer got suspicious.
"When I read the medical reports, I found it was an ultrasound scan ofapregnancy," Al Mazeina said inaradio report. He calledapatrol car and got the man arrested. "
Such people take advantage of the public's lack of knowledge," said Al Mazeina, adding that police arrested 65 beggars during the first 10 days of Ramadan.
Posted by Unknown | at 7:38 AM |0comments
Sheik Zayed ဗလီသို.လေ.လာရေးခရီး
ကွယ်လွန်သွားခဲ.ပြီဖြစ်တဲ.U.A.E နိုင်ငံရဲ.သမ္မတSheik Zayed Al Nayan အုတ်မြစ်ချပြီး
တည်ဆောက်ခဲ.တဲ.ကမ္ဘာ.အကြီးဆုံးဗလီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ.Sheik Zayed Al Nayan Mosque
ကိုဟိုတယ်ကနေလေ.လာရေးခရီးစီစဉ်ပေးလို.သွားရောက်လေ.လာခဲ.ရတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကစပြီး
Sheik Zayed ဟာ U.A.E နိုင်ငံကိုခေတ်မှီတိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ.တဲ.ခေါင်းဆောင်
Sheik Zayed ဗလီကြီးဟာဒူဘိုင်းကနေတစ်နာရီကျော်ကျော်ကားမောင်းသွားရတဲ.ယူအေအီး
လေးပါတယ်။ပင်မ၀တ်ပြုခန်းနားကmain entrance မှာအထဲမ၀င်ခင်အမျိူးသမီးတွေကအနက်ရောင်
the place heading to pray
အဓိက၀တ်ပြုခန်းကြီး main prayer hall ကတော.လူပေါင်း၇ထောင်စုပေါင်းဝတ်ပြုနိုင်အောင်
Sheikh Zayed ရဲ.အုတ်ဂူ ( ခြံစည်းရိုးအတွင်းမှာမို.ဘာမှမမြင်ရပါ။)
ကွယ်လွန်သွားခဲ.ပြီဖြစ်တဲ.Sheikh Zayed Al Nayan ကိုမြုပ်နှံထားတဲ.ဂူကိုလည်းဗလီပင်မအ
Posted by Unknown | at 1:27 AM |0comments
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာ. အသေးဆုံးလူသားနဲ.ရုရှားကကမ္ဘာ.အရှည်
Gulf News သတင်းစာမှာပါတာကိုပြန်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
He Pingping from Inner Mongolia, the world's smallest man, sits on the lap of Svetlana Pankratova from Russia, the Queen of Longest Legs, as they pose at Trafalgar Square in London on Tuesday.
London: He Pingping from Inner Mongolia, born with primordial dwarfism, holds the Guinness
World Record for the smallest man at 74.61cm while Svetlana Pankratova from Russia holds
the Guinness World Record for the longest leg of any woman at 132cm.
Pingping, the world's smallest man, sat on the lap of Svetlana Pankratova from Russia, the
Queen of Longest Legs, as they pose at Trafalgar Square in London on Tuesday as the
Posted by Unknown | at 1:17 AM | 1 comments
Meditation courses gain popularity among youth
YOUNG people, both from Myanmar and overseas, are increasingly being drawn to meditation asameans of clearing the mind and cleansing the spirit, sayanumber of people familiar with the field.
During holiday periods in particular, most meditation centres in the country are full and, in contrast to earlier years, most participants – as many as 70 percent – are students and young people, and even children, says U Kaung Yin,arepresentative of the management of the Keppabeinnya Meditation Centre in Inndaing, Hlegu township, Yangon.
The secluded centre is located near Bago,aone-hour drive from downtown Yangon, and comprises 223 private single detached buildings on 22 acres of land.
“During the long holidays the centre is usually full – we can get 400 people, including foreigners. Most are students and young people. Only about 30 percent are older and retired people,” U Kaung Yin told The Myanmar Times.
The meditation courses sponsored by Venerable Chekinda, an associate professor at the International Theravada Buddhist Missionary University, are especially intended for children and the younger people in Myanmar. The course attracts many well-educated youngsters.
A four-day, three-night short training course in meditation is organised from time to time for children, teenagers and young adults at Chekinda’s monastery in Hmawbi township –aremote area one hour from downtown Yangon by car. Three or four timesayear, separate short-term courses are offered to students at the basic education, matriculation and university levels. Each course trains more than 800 young people how to practise meditation. Accommodation and meals are free of charge.
The Venerable Chekinda sees particular merit in training children in meditation. “Meditation means seeing things as they really are. It is the way to eradicate misunderstanding and spiritual defilement, which are the main cause of all suffering,” the Venerable Chekinda said.
“I have come here 10 times to practise meditation. Thanks to meditation, I feel very comfortable dealing with people from all walks of life,” Ma Lei Yee Win,amedical student, told The Myanmar Times on the closing day of her meditation course in Hmawbi last month.
“Practising meditation has imbued in usasense of intelligence for how to behave in our society and to live our lives happily,” she said.
“Developing clarity of spirit and consciousness helps concentrate the mind and helps us study,” she said. “It also helps us make the right decisions and choose the proper course of action.”
Ma Su Mon Hein,athird year medical student, has now becomeafirm believer in Buddhism after hearingasermon preached by the Venerable Chekinda three years ago.
“My parents are traditional Buddhists but I never believed in Buddhism or God before. Even when I visited Shwedagon Pagoda I never paid homage. It was nothing to me, though I felt tranquil in my mind at seeing the pagoda,” Ma Su Mon Hein said.
“After listening to the Venerable Chekinda’s sermon, I gradually came to believe in Buddhism,” she added.
“This is the third time I have come here to pursue meditation through my own motivations and beliefs. Practising meditation helps me to live my life harmoniously within my society,” she said.
“I have acquiredamuch deeper concentration on my studies than I had before. Meditation also helps me to cleanse some of my spiritual defilement toacertain extent. I get used to being content with what I have,” Ma Su Mon Hein added.
“Before practising meditation, my mind was full of mess. Afterwards, things become clear and illusion and delusion gradually fade,” she said.
“We teenagers can easily tend to commit crime as our minds are not mature enough. As for me, my purpose in practising meditation is to control my mind and to avoid doing wrong,” Ko Aung Shwe Htun,abotanical student, explained.
“Practising meditation is the only way to control our complicated mind amidadaily life that seems ever more stifling,” he said.
Ma Mya Thida believes that anyone who wants to enjoy peace of mind, maturity, mental healthy and tranquillity should practise meditation regularly because it can help practitioners liberate themselves from samsara – the cycle of life in the next existence – and attain nibbana, which is the extinction of all suffering.
In this centre, the Venerable Chekinda has lectured to the younger generation on how to improve social relationships; resolve misunderstandings among friends, parents and relatives; perform meritorious deeds; smooth the rough edges of the mind; and raise the intellect, Ko Nay Zaw Linn Oo said.
“Our centre isabranch of Mahasi Vippasana and founded by Thadhamaranthi Sayadaw. There are altogether six centres across the country. We invite all those who want to pursue meditation in our centre, including foreigners,” U Kaung Yin said.
“This is my first time to study and practise meditation. My parents and friends encouraged me to learn meditation in this centre while I was in Myanmar,” said Ko Ye Htwe,a20-year-old student from Nanyang Technological University in Singapore.
Meditation encompassesavariety of techniques that develop mindfulness, concentration, tranquillity and insight, willpower and self-confidence. One can pursue meditation regardless of faith. Non-Buddhists often use these techniques to attain physical and mental health as well as for non-Buddhist spiritual ends. Buddhists pursue meditation as part of the path toward enlightenment and nibbana. In sum, meditation isaway to quiet the mind.
Posted by Unknown | at 12:52 AM |0comments
BEIJING - China's investigation of the tainted milk powder that sickened hundreds of babies widened to its dairy-producing regions on Sunday, as officials attempted to track down the source of melamine in the milk.
One baby died and over 400 developed kidney problems after drinking formula made from milk powder sold by Sanlu Group, one of China's largest milk powder producers that is partly owned by New Zealand's Fonterra Co-operative Group.
Farmers or dealers suppling milk to Sanlu may have diluted it with water and then added melamine,asubstance used in plastics, fertilisers and cleaning products, to make the milk's protein level appear higher than it actually was.
Teams travelled to Hebei, Guangdong, Heilongjiang and Inner Mongolia, the biggest dairy-producing regions, to reinforce local governments, ensure dairy inspections were fully carried out, and check milk powder already in circulation, said the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine.
"The teams' primary mission is to underscore the priority the central government has given to the case," said the notice, posted on AQSIQ's website www.aqsiq.gov.cn on Sunday.
A Chinese health official, Gao Qiang, vowed on Saturday to bring food quality supervision toa"new level" after the scandal, which was first reported last week.
It has stopped production of the milk powder and recalled products made before Aug. 6.
In Taiwan, authorities have sealed all Sanlu milk powder products that have yet to be distributed to retailers, after China's Taiwan Affairs Office said Sanlu had exported 25 tonnes of the milk powder to Taiwan in June.
"We've taken all the Sanlu milk powder off the shelves at stores," said Wang Cheng-huei,adeputy director-general of the Bureau of Standards, Metrology and Inspection at Taiwan's economics ministry.
Sanlu had begun receiving customer complaints in March that babies' urine was discoloured and that some had been hospitalised, the China Daily said on Saturday.
Posted by Unknown | at 9:20 AM |0comments
ထိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဘွဲ.တော်မှာ Venerable Phra Acharn Mun
ပင်။မြန်မာရဟန်းတော် ၁၀ ပါးပြည်ပသို.သာသနာပြုသည်နှင်.သူတို.လူမျိုးတစ်ပါးသူ.နိုင်ငံတွင်
ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ထေရုပတ္တိကို www.what-buddha-taught.net တွင်ဒေါင်းလုပ်
တပ်မတော်ဘက်ကလဲ တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ၊ ပြည်သူ့ဘက်ကလဲ ပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖ၊ ဒီတိုက်ပွဲဟာ နှစ်တွေကြာညောင်းနေပြီ။ တိုင်းပြည်လည်း ဖွတ်ဖွတ်ကျေနေပြီ။ လူတွေလည်း အများကြီး ဘ၀ပျက်ဆင်းရဲခဲ့ပြီ။ အခုလည်း နအဖဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်မပါဘဲ စိတ်ကြိုက်ဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး စစ်အစိုးရပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်ဦးမယ်။ ဒီပုံအတိုင်းဆို post election political situation က ဒေါ်စုနဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တွေ လွတ်လမ်းမမြင်သေးဘူး။ အစိုးရက တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ ဥပဒေပြုရေးဏ္ဍိုင်တွေကို ကိုင်ထားဦးမယ်။ economy က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရှိနေဦးမယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အကူအညီအထောက်အပံ့တွေ ဝေးနေဦးမယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေ၊ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေ ထွက်ပေါက်မရှိ ပိတ်နေဦးမယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေစီလို့ ခေါ်မယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အေးချမ်း သာယာခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ထောင်မယ် ဆိုရင်တော့ အဆိုကျော်ကိုင်ဇာရဲ့ သီချင်းအတိုင်း ““စွမ်းမယ်ထင်လုပ်ကြည့်လိုက်လေ”” လို့ပြောရမှာဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာတစ်ခုမှ အကျိုး မရှိပါဘူး။
အခု၂၀၀ရ-၂၀၀၈မှာ နအဖ pressure မိနေတယ်လို့ထင်တယ်။ အရင်လို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မလုပ်ရဲတော့ဘူး။ ရွေးစရာနည်းလမ်း ကုန်သွားတာလည်းပါမယ်။ အရင်တက်လာခါစက Diplomacy ဆိုတာ ဖြူသလားမဲသလား မသိဘူး။ ဂရုလဲမစိုက်ဘူး။ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက် လုပ်ချင်ရာအကုန် လျှောက်လုပ်လာခဲ့တာဘဲ။ ၁၉၈၈ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ ရှက်တတ်လာတာမှာ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆို ဦးနေ၀င်းလည်း ဘယ်လက်နှေးလိမ့်မလဲ၊ ထစ်ကနဲဆို သေနတ်ဆွဲပစ်တဲ့ ကောင်းဘွိုင်ကြီးပေါ့၊ မိတဲ့ကောင် ထောင်ထဲထည့် လာခဲ့တဲ့သူဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၈မှာ ဦးနေ၀င်း လူထုကိုရက်ရက်စက်စက် မလုပ်ရဲတော့ဘူး၊ ဆင်းပေးသွားခဲ့တယ်။ ရှက်တတ်လာတာကိုပြတာပါ။
အခုမြန်မာနအဖလည်း ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပြီး သူတို့ကိုသူတို့ တရားဝင်အစိုးရဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ လုပ်ချင်လာပြီ၊ စစ်အစိုးရ အခေါ်ခံရတာကို မကြိုက်တော့ဘူး၊ ရှက်တတ်လာပြီ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊ သံတမန်တွေက သူတို့ကို သေချာကြည့်ရင် ရှိုးတိုးရှန့်တန့်နဲ့ မနေတတ်တော့ဘူး၊ တကယ်ပြင်ဘို့ စဉ်းစားနေပြီလို့ ထင်တယ်။
အခုနောက်ပိုင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီးမှာတော့ နအဖ နဲနဲမာန်ကျသွားတယ်။ အရင်က မြန်မာပြည်ဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာ တိုင်းပြည်၊ ခေါင်းဆောင်တွေကလဲ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေမို့၊ မင်းကျင့်တရားနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်သူတွေမို့ ဒီလိုဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေ တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပြည်သူတွေ ယုံအောင် ခဏခဏ ပြောခဲ့ကြတယ်။ တော်ယုံကြီးကြီးမားမားဖြစ်လဲ လူမသိအောင်၊ သတင်းအပြင်မထွက်အောင် မှောင်ချထားနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုသူတို့ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေလို့ ယုံနေခဲ့ကြ တယ်။
အဲ-နာဂစ်မုန်တိုင်း မိလိုက်တာမှာ တညထဲနဲ့ သူတို့တွေ ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ ဆင်းရဲတဲ့သာမန်အစိုးရဘဲ၊ မြန်မာပြည်ဟာလည်း ဘာမှ မဟုတ်ဘူး၊ သူများနိုင်ငံတန်းတူဆင်းရဲတာဘဲ၊ ဘေးအန္ဒရယ်ဆိုးတွေကျရောက်နိုင်တာဘဲ၊ လူငါးရာ တစ်ထောင်သေတုန်းက ဖုံးဖိထား လို့ရတယ်၊ အခု လူသိန်းနဲ့ချီသေလိုက်တော့ ဖုံးဖိထားလို့လဲမရဘူး၊ တစ်သက်လုံး ယုံခဲ့သမျှ လေမုန်တိုင်းတစ်ည တိုက်လိုက်တာနဲ့ အားလုံး မျက်စီရှေ့မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်သွားတယ်။ နာဂစ်ကို အကောင်းဘက်ကစဉ်းစားရင်တော့ ဒါမြတ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေက အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုတော့ ရောက်နေတာအမှန်ပါဘဲ။ ကောင်းလာမှာလား? ဆိုးသွားမှာလား? ဘာဖြစ်လာမဲ့ အလှည့်အပြောင်းလဲသာ ကြိုမပြောနိုင်တာ၊ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ တစ်ခုခုတော့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တော့မယ်။ အခြေအနေ တွေက ၂၀၀၈ နာဂစ်အပြီး၊ ဆန္ဒခံယူပွဲပြီးကထဲက ပြောင်းမှန်းမသိဘဲ ပြောင်းလဲသွားတယ်။
NLDက အရင်အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ထားလို့ သူသွားချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကို ရှေ့တိုးချင်တဲ့သူ၊ နအဖက ဒီမိုကရေစီကို ဖုတ်ပူမီးတိုက်အလျှင် အမြန်ပြောင်းလဲလိုက်ရင် ယူဂိုဆလဗ်လို တိုင်းပြည်ပြိုကွဲသွားမယ်။ ကိုဆိုဗိုလိုပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်သွားမယ်၊ ကုလသမဂ္ဂတွေဘာတွေဝင်မရှုပ်နဲ့၊ ၀င်မပါနဲ့ မရဘူးလေဆိုပြီး ရှေ့မတိုးနိုင်အောင် တိုင်းပြည်ကို ဆွဲထားတယ်။ NLD ကို တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့တုပ်ထားသူ။
ဒီကနေ့အခြအနေကတော့ နအဖက သူ့လမ်း (road map) နဲ့မှ ဒီမိုကရေစီတကယ်ရမှာဆိုပြီး အခြေခံဥပဒေအသစ်ဆွဲပြီး ၂၀၁၀မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဘို့ ရှေ့တိုးချင်သူ။ NLDက ဒီလိုမတရားမလုပ်နဲ့လေဆိုပြီး သဘောမတူဘူး၊ ငါတို့မပါဘူး၊ UN ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ ၀င်မရှုပ်နဲ့၊ နအဖ ကိုယ့်ဖာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပစေ ဆိုပြီး ၀င်မပါဘူးလုပ်နေသူ။ ဆွဲထားသူ၊ နအဖနဲ့ NLD နေရာခြင်းက ပြောင်းပြန်ဖြစ် သွားတယ်လို့ မြင်တယ်။
မတူတာတစ်ခုရှိတယ် NLD က နအဖကို သူ့တုန်းကလို တိုင်မှာကြိုးတုပ်ထားလို့မရဘူး၊ နအဖလုပ်တာကို သဘောမတူရင် ၀င်မပါတာဘဲ တတ်နိုင်တယ်၊ ရပ်သွားအောင် မတားနိုင်ဘူး။ နအဖကလဲ အဲဒီဟာကို ဂယ်ပေါက်လို့ထင်ပြီး လျှောကနဲ ထွက် သွားတယ်။ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကို လေထဲမိုးထဲမှာတောင် အတည်ဖြစ်အောင် ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီး ၂၀၁၀မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို လည်း လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကိုလုပ်မယ် လို့ ပြောလိုက်မိတယ်၊ ခုတော့ ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ် မိသွားတယ်။ NLD မပါလဲ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရတော့မယ်။ ဂယ်ပေါက်လို့ထင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ NLD၀င်မပါရင် နောက်တက်တဲ့အစိုးရအတွက် ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီတွေနဲ့ ဝေးနေသေးမှန်း တွက်မိပုံရတယ်။ NLDကို ပြတ်ပြတ် သားသား မကိုင်သေးဘူး။ ဂန်ဘာရီကိုဖိတ်ပြီး ၂၀၁၀မှာ ၀င်အရွေးခံဘို့ နားချခိုင်းတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်စုကကြားထဲက ဂန်ဘာရီကို ဖယ်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ သတင်းစာအရ နအဖရဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်ကိုပါ ထပ်ဖယ် လိုက်တယ်၊ ဒီလူတွေ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ဒီအဆင့်လောက်နဲ့ မရဘူး ပြောလိုက်တာ ထင်တယ်။ နအဖလုပ်ရှားဖို့ နေရာကျဉ်းသွားတယ်။ UNဆိုမျက်နှာဘယ်ထား ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ဘာဆက်ဖြစ်ဦးမလဲ မသိဘူး။ ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်။
တိုင်းပြည်လဲ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် နှစ်၅၀ကျော်လာပြီ မချမ်းသာနိုင်သေးဘူး။ မအေးချမ်းနိုင်သေးဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဘာလို့ နှစ်ဘက်လုံး ခေါင်းမာနေကြမှာလဲ? တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးလေးစားစား သတ္တိရှိရှိနဲ့ အပေးအယူ အလျှော့အတင်း compromise လုပ်ကြဘို့သင့်ပြီ ထင်တာဘဲ။ နောက်တောင်ကျနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကတော့ ဘယ်သူအုပ်ချုပ် အုပ်ချုပ်တိုင်းပြည်ကောင်းဘို့လိုရင်းပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးလဲ အရည်အချင်းရှိရင် အရွေးခံပါ။ မဲထည့်မယ်။ ဒေါ်စုလည်း တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်နိုင်ရင်လုပ်ပေးပါ။ တပ်မတော်ကော NLDကောတူတူပါဘဲ။ ဘယ်သူမှမသာပါဘူး၊ ခြောက်ပြစ်ကင်း မဟုတ်ဘူး၊ အရည်အချင်းရှိသူတက်ရင် တိုင်းပြည်ကောင်းစားမှာဘဲ။ ဘယ်သူအရည်အချင်း ဘယ်လောက်ရှိလဲ အူဘယ်နှစ်ခွေရှိလဲ ပြည်သူတွေကသိပါတယ်။ တပ်မတော်သားတွေပါနေတာလဲရပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကို သားသမီးတွေဘဲ၊ NLD လဲ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အနစ်နာခံနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဘဲ၊ မျှမျှတတစဉ်းစားကြည့်မယ်။
Compromise လုပ်ကြဖို့ ကျွန်တော် အကြမ်းဖြင်း မှန်းကြည့်သလောက် -
အတိုက်အခံက (၁) ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ် (၂) ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြု၊ ၀င်ပြိုင်၊ (၃) အရင်အစိုးရလုပ်ခဲ့တာတွေကို တရားမစွဲပါဘူး လူနဲ့ပစ္စည်း လုံခြုံမှု အာမခံ။
နအဖက (၁) *၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အားလုံးဝင်ပြိုင်နိုင်အောင် လုပ်ပေး၊ (၂) လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေးကို အစိုးရက ၀င်မစွက်နိုင်အောင်လုပ်ပေး (၃) လွှတ်တော်သက်တမ်း ၂ ခါပြည့်ရင် တပ်မတော်သားအမတ် ၂၅% မထည့်တော့ဘူး ဆိုတာ အခြေခံဥပဒေထဲ ထပ်ထည့်။
ဒီလောက်ဆို သင့်တော်မလား? မျှတမလား? Thinking aloud ပေါ့၊ အမြင်မတူသူတွေ ရှိမှာပါ။ နှစ်ဘက်စလုံးအလျှော့ပေး Compromise ကတော့ လုပ်ကို လုပ်ရမှာဗျ။ မလုပ်လို့ မရဘူး။
* ကုလသမဂ္ဂကပြောတဲ့ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အားလုံးဝင်ပြိုင်နိုင်အောင် လုပ်ပေး၊” ဆိုတဲ့အဓိပါယ်က အတိုက်အခံတွေ ၀င်ပြိုင်ခြင်အောင် သင့်တော်တဲ့ atmosphere လုပ်ခိုင်းတာပါ။ ဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ understood ပါ။
Posted by Unknown | at 1:32 AM |0comments
၀ံသာ မနုနိုင်ကြတော့သည့် အကြောင်း မေတ္တာစာ
မကြာခင်က မျက်စိကြီး နားကြီး မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတဦးနှင့် စကားစပ်မိရာမှ စင်္ကာပူက ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မောင်ကြည်က ၂၁ ရာစုအတွင်း မြန်မာလူမျိုး ပျောက်သွားနိုင်သည် ဆိုကြောင်း သိရလေသည်။ အနည်းငယ်ချဲ့ကားလွန်းသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း မှန်သင့်သလောက် မှန်ပေ၏။
အခြားသော ယိုးဒယား၊ ခမာ စသည့် အရှေ့တောင်အာရှသားများထက် မြန်မာလူမျိုးများသည် ပြည်ပလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို ပိုခံရသည် ထင်ပါ၏။ ဗီယက်နမ်တို့ကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီ၍ မြောက်အရပ်က အိမ်နီးချင်းကို တွန်းလှန်ခဲ့ရပါသည်။ မလေးတို့ကဲ့သို့လည်း အရင်းရှင်ကုန်ထုတ်စီးပွားရေးနှင့်အတူ ပါလာသည့် ဈေးပေါသည့် လုပ်အား အိန္ဒိယသားတို့ လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း ကြုံခဲ့ရပါ၏။ ဂျပန့်ကျေးဇူးကြောင့်သာ ကုလားများ ပြန်ပြေးကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အမြင်ကျဉ်းမှုကြောင့် ဗမာ့စီးပွားရေးကို ကုလားတို့ လက်ဆုပ်ဖြေရသည်။
သို့သော်လည်း ၁၉၄၁ ဂျပန်စစ်ရောက်မှ စ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ၆၇ နှစ် လုံးလုံး ဗမာပြည်ကြီးသည် အင်္ဂါဂြိုလ်မင်း၏ တက်ရိပ်အောက်မှ မလွတ်နိုင်ပေ။ မြို့တော် (၀ါ) အဓိကစီးပွားရေး မြို့ကြီး၏ အလယ် ဘရင်းကယ်ရီယာများ လှည့်နေရသည်ဆိုသော တိုင်းပြည်တွင် အဘယ်ကဲ့သို့သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ကြမည်နည်း။
သို့သော် အင်းလျားစောင်းတွင် အမေရိကန်အကြံပေး ပါရဂူနှင့် တက္ကသိုလ်ကျုတာ မမတို့ မွန်းလိုက်ပစ်ကနစ် ထွက်ကြချိန်ဝယ် မိုင် ၁၀၀ မျှမဝေးသော မြောက်ဘက် ပဲခူးရိုးမစောင်းမှာ ဖြတ် ၄ ဖြတ် စနစ်နှင့် မိတ်အင်ဘားမား ဗီယက်နမ်စစ် ခင်းနေကြသည်။
ဘယ်အခါမှ အစေးမကပ်ခဲ့ကြဖူးသော မြန်မာနှင့် တိုင်းရင်းသားများကြားတွင်ကား ပင်လုံစာချုပ်ကြီး ဖုတ်ပူမီးတိုက် ထိုးပြီးနောက်ပိုင်း စစ်မှန်သော ရင်ကြားစေ့မှုဟူ၍ မရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသား လူရည်တက်များအကြား နိုင်ငံရေး ကစားပွဲကြီးပမာ ဖြစ်နေပါတော့သည်။
ကစားပွဲ အရှိန်ကောင်းနေချိန်မှာ တရုတ်နီနှင့် အမေရိကန်တို့ “ခိုးငွေ့ချင်းဆိုင် တန်ခိုးပြိုင်” ကြချိန်နှင့် သွား၍ တိုက်ဆိုင်နေပေသည်။ နိုင်ငံရေးသမား လူစွာ အချင်းချင်း ကွန်မြူနစ် ဆိုရှယ်လစ်ဟူ၍ ဆိုင်းဘုတ်ချင်းပြိုင်ပြီး လူသတ်ပွဲကြီး ဆင်ကြချိန်တွင် ပြည်ပအုပ်စုအသီးသီးကလည်း မီးလောင်ရာ အနုမြူဗုံး ကြဲပေးကြသည်။
စင်စစ် ဗမာပြည်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဟူ၍ ခေတ်အဆက်ဆက် လုပ်ခဲ့သမျှ ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရသနည်း ဆိုသည့် အမေးကို ဖြေရာ၌ ပြည်ပပယောဂကို ထည့်သွင်းဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါ၏။
ကိုရီးယားကဲ့သို့ ၂ ခြမ်းကွဲ၍ တောင်နှင့် မြောက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်မသွားနိုင်။ ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ တဘက်သတ်လည်း အနိုင်မယူနိုင်သော ဗမာပြည်တွင် ခမာနီကဲ့သို့ မျိုးဖြုတ်ပွဲ ဆင်မည့်သူ၊ ပြည်ပမှ မသာပွဲစား၊ ခေါင်းပွဲစားအဖြစ် လက်နက်ရောင်းမည့်သူများသာ ရှိသဖြင့် ဗမာပြည်ဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာ ကွန်ဖရင့်ဆိုသည်မှာ ယောင်လို့ပင် အိပ်မက်မိနိုင်မည် မဟုတ်ပါတည်း။
ဤကဲ့သို့ ဦးလူပေါများနှင့် အချင်းချင်း ပဋိပက္ခနေကြသဖြင့် ယန်းကီးနှင့် ပေါက်ဖော်တို့ စစ်မတိုက်တော့ဘဲ စီးပွားရေး ကူးသန်းနေကြသည်ကိုပင် သတိမထားမိတော့နိုင်။ သူတို့ချင်း အပေါ်ယံ ၀ါယောစစ်ခင်း၍ ဈေးကစားသည်ကိုပင် အဟုတ်မှတ်၍ ရွှေမြန်မာတို့ ယောင်လို့ ကောင်းနေကြတုန်း ဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်ကား မြောက်အရပ်မှ ဈေးပေါသော ကုန်စည်လှိုင်းလုံးကြီးအောက်တွင် မြန်မာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ လျှောမွေးဖြစ်ရတော့သည်။ အာဆီယံ ဖရီးတရိတ် မပေါ်ခင်ကတည်းက မြန်မာပြည်က ထွက်သမျှ ဖရီးရိုက်မည့်သူများက အဆင်သင့်။ လူတိုင်း ထမင်းနပ်မှန်အောင် “ရုန်း”ရသော တိုင်းပြည်၌ တန်းတူညီမျှရေး၊ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသော စကားလုံးကြီးများမှာ ၀ါးမရသော ကျောက်ခဲများသာ ဖြစ်နေသည်။
“ ငွေကို ယူသည်၊ မြေကို ယူသည်၊ ပြီးတော့ လူကိုပါ ယူသည်” ဆိုသည့် ရှေးသီချင်းကဲ့သို့ ဗမာပြည်က ထွက်သမျှ ဇီးစေ့နှင့် ဖွတ်လိပ် ကစ ရသမျှ ယူသည့် လူဝါမျိုးကြီးများသည် မြန်မာတပြည်လုံးကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၁၀၀ က အောက်ဗမာပြည်ကို ကုလား အပိုင်စီးသကဲ့သို့ ယခုလည်း တပြည်လုံးကို ဂန္ဓလရာဇ် ဇာတ်သွင်းဖို့ ကြံတော့သည်။
အရာရာ ချွတ်ခြုံကျနေသော သာကီဝင်များကား ရုပ်မြင်သံကြားမှ ကိုရီးယားဇတ်သွင်းခြင်းကအစ အရှေ့အာရှ၏ သြဇာကို လွန်ဆန်နိုင်ကြသည် မဟုတ်။
အညာကျေးလက်နှင့် တောင်ပေါ်ဒေသသားများက အစ ရန်ကုန်လူ့မလိုင်များအဆုံး “ရွာပြောင်း” ဖို့သာ ကြံနေကြခြင်းကို မျိုးချစ်စိတ် ရှုဒေါင့်က အပြစ်ဖို့ နေ၍မပြီးပေ။ သီပေါလက်ထက် မန္တလေးပျက်ခါနီးကလည်း အညာသားတွေ အောက်ပြည် ရွှေ့ခဲ့ကြဖူးသည် မဟုတ်ပါလား။ သူ သူ ကိုယ် ကိုယ် မည်သူမဆို “ အကောင်း” တော့ ကြိုက်တတ်ကြပါသည်။
ထိုသို့ မပျော်သူကို ပျော်အောင် မထားနိုင်၍ ပြည်ပမြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူဦးရေ သန်းနှင့်ချီပြီး ဖြစ်လာရသည်။ ထိုအထဲတွင် တိုင်းပြည်ကို ရှေ့ဆောင် ရှေ့ရွက်ပြုမည် လူရည်တက်တွေ ဆုံးရှုံးရသည်မှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာများ အမျိုးသားလက္ခဏာကို မပျောက်အောင် ထိန်း၍ မြန်မာစိတ် (မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုသားစိတ်) ကို အမြဲ နှလုံးသွင်းနိုင်မှသာ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက် စိတ်ညွတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်မူက ရှေ့က ပညာကျော်များ အဟောဖတ်ကြသလို ၂၁ ရာစုတွင် မြန်မာတို့ တိုင်းပြည်မပျောက်ခင် လူမျိုးပျောက်နှင့် ကြလိမ့်မည်။
Posted by Unknown | at 2:31 AM |0comments